Banyere Anyị - Jilin Yuantong ịnweta Co., Ltd.
Jilinyuantong ralnweta Co., ltd. nke dị na Baishan, Jiling Province, bụ ebe diatomite kachasị elu na China ọbụlagodi Asia, nwere enyemaka 10, 25km2 nke ebe a na-egwupụta akụ, ebe nyocha 54 km2, ihe karịrị 100 nde tọn nke diatomite nke na-ede karịa 75% nke China niile gosipụtara. Anyị nwere usoro mmepụta 14 nke diatomite dị iche iche, yana ikike imepụta kwa afọ karịa tọn 150,000.
Ruo ugbu a, na Eshia, anyị aghọwo nnukwu onye nrụpụta nke diatomite dị iche iche nwere nnukwu akụ, teknụzụ kachasị elu na oke ahịa na China na Asia. Ebe ọ bụ na ya oruru na 2007, anyị guzobere a akụ-kpụ ọkụ n'ọnụ miri-nhazi enterprise na integrates diatomite Ngwuputa, mmepụta, ahịa, na R&D na nkwado nke ndị enyi si n'agbụrụ niile.
Na mgbakwunye, anyị enwetara ISO 9 0 0 0, Halal, Kosher, sistemụ nchekwa nchekwa nri, sistemụ njikwa ogo, asambodo ikike mmepụta nri. Banyere anyị ụlọ ọrụ nsọpụrụ, Anyị bụ ndị isi oche unit nke China Non-dara ralnweta Mmeputa Association Professional Committee, China diatomite nyo enyemaka ụlọ ọrụ ọkọlọtọ drafting unit na Jilin Province Enterprise Technology Center.
Mgbe niile na-erube isi "ahịa mbụ" nzube, anyị ji ịnụ ọkụ n'obi na-enye ndị ahịa na nke kacha mma-na ngwaahịa na-adaba adaba na-eche echiche ọrụ na oru ndụmọdụ. Jilin Yuantong Mineral Co., ltd. dị njikere ịme ndị enyi si n'akụkụ ụwa niile ma sonyere aka iji mepụta ọdịnihu dị mma.
Ahịa ahịa kariri na 60%